Abesifazane bayizidalwa imiva kanye kithi kubaluleke ngaphezu ezibonakalayo. Ngaphandle ethandekayo khona, ayikho wobulili fair engazizwa ujabule ngokuphelele. Yingakho wesakhiwo sothando magic zesifazane ibekwe ezindaweni ezikhethekile udumo. Noma yimuphi lady uyathakatha kancane ngokwemvelo. Ake ucabange ngako, ngoba Ukuxubha izinwele zakhe phambi kwesibuko, ulinganisa ingubo noma ukulungisa isimo, ngamunye wethu ufuna ukuba ebukekayo, ukuthi uyakwazi ukuphonsa ukupela. Ongazange ngiphuphe ladies abasha njengoba Tosya Kislitsina uthi: "Ngangizama uhamba ngomgwaqo ... futhi wonke umuntu esiphikisayo ngalokho ayekubona kimi ukuba bangawi bese ngokwabo e kushe embondelene." Kodwa indlela ukuthi ube "umbulali" wayesalokhu umcabango enhle up by ogogo bethu. Kuyinto uzungu uthando ezenza umuntu omuhle futhi ebukekayo emehlweni abanye: nabo okuhle, izintombi obomvu, namaxhegu, abesifazane ubudala ngisho izingane ezincane. Njengazo zonke emhlabeni - hhayi lena charm? Namuhla, Nokho, ngeke embule izimfihlo kokudaliweyo "izikhali zembubhiso", nikela amandla abo aba nokuthula ngokwengeziwe, okungukuthi beyofuna omunye wakhe kuphela.
Evamile, bonke wesakhiwo of uthando kungenziwa zihlukaniswe amaqembu amathathu: ukuheha uthando, ukulungisa ubuhlobo akhona futhi ukubuyela ethandekayo.
Into yokuqala efika emqondweni uma uzwa mayelana uthando magic, imemori we potions uthando namasiko at emathuneni inyanga egcwele.
Ngokuphambene nalokho okukholelwa yiningi, ngoba uthando iziphonso akuhlangene ne zonke lezi izindaba horror akuzona. Inkulumo kuleli cala iya ngokuvusa empilweni yakho lwamabutho okuhle, ukusungulwa isimo sengqondo olukhethekile unethemba kanye lightness okungukuthi nobuntu indoda ejabulayo.
Ukuze magic isiko Kwaletha imiphumela elindelekile, kubalulekile ukukhetha isikhathi esifanele. Sekuyisikhathi eside kwaziwa ukuthi uHlelo iziza sothando inyanga egcwele ephumelela kunazo. Rituals ezidinga ukuphindaphinda okuphindaphindiwe kungase kwenziwe esigabeni ezikhulayo zenyanga.
Kusukela emalanga eliviki mahle kakhulu ngoMsombuluko, ngoLwesithathu nangoLwesihlanu. Uma ukukhanya ebusuku kulokhu nophawu Gemini noma Libra, kulokhu kungase kubhekwe njengokwelapha ekahle romantic imicikilisho yokusebenzelana magic.
Inyanga, njengoba inkanyezi zesifazane, kusiza izintokazi ukuthola ezikhangayo futhi sexy, kanye nezimo ukuze silondoloze ngobusha.
Kwaphela amakhulu eminyaka, ubulili fair ukuba bahlangane emaHholo ayisesemikhulu wakhe, usebenzisa zonke izinhlobo izinto zemilingo. Dala mascot yakho noma udale iziza ukuhlangabezana uthando, ungakwazi noma iyiphi intombazane yesimanje.
Kwenzeka ukuthi owesifazane othanda futhi kubukeka enza kahle, futhi zihlakaniphile, kodwa amadoda ku ukunakwa wakhe okhethekile ungaphambuki. Futhi konke lokho engazizwa ubulili oluqine umama wakulowo ngokocansi ethinta amadoda kuzinga enganakile. Izinga le imvelo akuniké yilowo nalowo phakathi kwethu, kodwa ezinye leli "parele" kufihliwe ngokujulile ukuze nqunu iso ke akaboni. Kuze phendla ubulili babo ukuheha empilweni yakho amandla lothando, ukusiza isiko esilandelayo.
On inyanga ezikhulayo, phakathi kobusuku, ume phambi iwindi futhi ubuka reflection wakhe engilazini, izikhathi ezingu-20, bazethula elikhulu, ukuphinda la mazwi:
Whispers intombi obumnyama
Ngingumfana khulula, mina ongagcwali,
Ngake ngakhangwa futhi ikhanga.
Nakuba bephonsa ukupela, cabanga ukuthi amandla kwenyanga ogcwele ngokusebenzisa wena imizwa yakho ezikhulayo kanye inkanyiso. I isiko uqhutshwa phakathi nesonto futhi iphela ngo-egcwele.
Impumelelo incike uthando magic akuyona emazwini ngesakhiwo noma khona (ukungabi) kini amakhono. Into esemqoka lapha luzokhula ukholo lwakho ekutheni umphumela. Ngakho-ke, kusukela mzuzu alinge ngokuphindaphindiwe amazwi athi wokuqala uthando ukupela kufanele uqale impilo entsha. Ungacabangi ngokuhluleka. isiko lakho ngokuqinisekile ukusebenza. Kungcono ukuthenga ingubo enhle, wenze kwekhanda entsha ukuthi sivele uma esengozini isikhulu eside elindelwe, wamhlangabeza ikhanda ivuliwe.
Yiziphi izindawo itshe itopazi?
I-OSB-3 ipuleti: izici nesicelo